Warshada kartoonada koobiyeeyaha - Shiinaha Koobiyaha kartoonada waxsoosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha
1.Asc toner budada la isticmaalay.2. Xakamaynta tayada: 100% tijaabi si loo ilaaliyo tayada sare.3. Sanduuqa xirmada: OEM iyo sanduuqa ODM ee doorashada.4. Tayada ugu sareysa: Ma jiro dhul madow .5. Dammaanad: 1: 1 beddel haddii ay cilladi jirto ka dib markabku 1 sano gudaheed.6. Chip: Waxaa loo adeegsaday chips-ka ugu wanaagsan lambarka 1aad.